mobile banking သုံးသူတိုင်း သိထားစေချင်လို့ ဖတ်မိတာလေး ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် - Thadin
Homeကြားသိရသမျှmobile banking သုံးသူတိုင်း သိထားစေချင်လို့ ဖတ်မိတာလေး ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
Fb friend တို့​ရေ ကိုယ်​​တေဒီ​နေ့ပြုးပြဲ​ပြေးရတဲ့က်​တ်​စ​လေး share ချင်​လို့ပါ
မနက်​က daddy ကဖုန်းဆက်​လာပါတယ်​ kbz joint account ပိုက်​ဆံထုတ်​လားတဲ့သူ့ဆီ OTP no ဝင်​လာလို့တဲ့ ကိုယ်​က kbz lock ကျ​နေတာကြာလှပီ သူံးမရလို့မဟုတ်​​ကြောင်း​ပြောပါတယ်​ msg ​တေဆက်​ဆက်​ဝင်​​နေတာမို့ mobile banking call.center ကိုဆက်​ပီး အကျိူးအ​ကြောင်းလှမ်း​ပြောပါတယ်​ သူတို့က တ​ယောက်​​ယောက်​သူံး​နေပါတယ်​ သူတို့ထိန်း​ပေးမယ်​​ပြောလို့ ​ဒက်​ဒီကအ​ကောင့်​ကိုမျက်​​ခြေမပြတ်​စစ်​​နေပါတယ်​ စဝင်​တာ ၉နာရီ ၅၃ မိနစ်​ပါ မတ်​​ဆေ့​တေ ဆက်​တ်ုက်​​ရောက်​လာပီး​တော့ စစ်​​နေတုန်းပးမှာပဲ 10:19 မှာ သိန်း ၅၀တစ်​ခါ 10:28 နှစ်​ခါ သိန်း ၁ရာပါသွားပါတယ်​
ကိူယ်​လည်း​ဘဏ်​​ပြေး ဒက်​ဒီလည်းရုံးက​နေဘဏ်​ကိုလိုက်​လာကြပါတယ်​ ရန်​ကင်းဘဏ်​ခွဲ​​​မန်​နဂျာ အစ်​မကို​ပြောပြတဲ့ထူတ်​လို့ရတဲ့ minimum amount ကို0ထားလိုက်​ပါတယ်​ဒါ​တောင်​ကျွန်​မ ကို​ပြော​နေ​သေးတယ်​ဦးကပိတ်​ထားတယ်​ဆို​ပေမဲ့ minimum ထားလိုက်​မှရတာဆိုတာကို အာ့အဲ့ထိကို ဘဏ်​​မန်​​နေဂျာဆိုသူက ​အေး​ဆေး ​အ​နေအထားပါကျွန်​မက​ပြောပါတယ်​ internal account transfer မို့ လွှဲသွားတဲ့အ​မောင့်​ကိုကြည့်​​ပေးပါလို့ဆို​တော့ mobile banking ကိုင်​တဲ့ center ကို​ပြောမှရမာတဲ့ ​ကျွန်​မလည်း​​ဒေါသကထွက်​လာပါပီ အစ်မတို့ဘဏ်မှာထားတာ​ ​လေ
အဲ့အချိန်​အ​ဖေက mobile banking ဘက်​ကဖူန်းဆက်​လာပါတယ်​ လွှဲသွားတဲ့အ​ကောင့်​က ​မြောက်​ဥက္ကလာ​ခေမာသီ ဘဏ်​ခွဲ ပါတဲ့အဲ့အ​ကောင့်​ကိုသဲူးခွင့်​​ရောထုတ်​ခွင့်​ပါပ်​တ်​လိုက်​ပါတယ်​….
ဖွင့်​ထားတဲ့ဘဏ်​ရဲ့မန်​​နေဂျာနဲ့တိုင်​ပင်​ပါရဲမှုခင်းဖွင့်​ပါလို့​ပြောပါတယ်​ မန်​​နေဂျာမမ က အန်​ကယ်​ဘာလုပ်​ချင်​ပါသလဲတဲ့ ဒက်​ဒီလည်းစ်​တ်​တို​နေပါပီ အန်​ကယ့်​ပိုက်​ဆံပြန်​ထည့်​​ပေးပါပြန်​လု​ချင်​တာ​ပေါ့ကွယ်​ထိုင်​ကြည့်​​နေရမလားဆိုမှ ဟိုဖုန်းဆက်​ဒီဖုန်းဆက်​လူပ်​​နေပါတယ်​
သူခနခနထပ်​ခါထပ်​ခါ​ပြော​နေတာက Mobile banking pwd သိသွားလို့ဖြစ်​တာပါဆိုတာပါပဲ
(Mobile banking pwd သိတယ်​ပဲထားပါ​တော့ သူ​ငွေလွှဲမယ်​ဆို​တော့ daddy ph ထဲဝင်​လာတဲ့ pwd ကို ဟိုဘက်​ကလူက အကြားအမြင်​ရ​နေလို့သိပီးလွှဲသွားတာလား သူတို့ရဲ့ mobile banking safe မဖြစ်​တာလား ဆိုတာထမင်းစားကြီးသူတိုင်းသိမှာပါ​နော်​)
ဘဏိ ဖက်မှ c​yber law အရလိုက်​​နေ​ကြောင်း၊ ပို​က်​ဆံအမြန်​ဆူံး ပြန်​ရ​အောင်​​ဆောင်​ရွက်​​ပေးမည်​ဖြစ်​ပါ​ကြောင်း လုပ်​သွားတဲ့အ​ကောက့်​ပိုင်​ရှင်​ကို​တော့ ခုထိ ရဲ​တောင်​မချပြ​သေးပါ​ကြောင်း… (ဒါကျ security ​ကောင်းတယ်​ တလွဲဆံပင်​​ကောင်းတယ်​ဆိုတာ မျိုး )
ဒီကိစ္စ​တေပြီးရင်​​တော့ကျွန်​မ​ရော ဒက်​ဒီ​ရော kbz account ကို ပိတ်​ပါပီ​နော်​ တာ့တာပါပဲလို့ Customer ​တေလည်းအားနာပါတယ်​​နော်​ ​နောက်​ဆို kbz လဲူးဝလွှဲမရ​တော့ပါပုလိူ့​နော်​…..
Credit – Thida Aye Lwin
Fb friend တို့ရေ ကိုယျတဒေီနပွေု့းပွဲပွေးရတဲ့ကျတျစလေး share ခငျြလို့ပါ
မနကျက daddy ကဖုနျးဆကျလာပါတယျ kbz joint account ပိုကျဆံထုတျလားတဲ့သူ့ဆီ OTP no ဝငျလာလို့တဲ့ ကိုယျက kbz lock ကနြတောကွာလှပီ သူံးမရလို့မဟုတျကွောငျးပွောပါတယျ msg တဆေကျဆကျဝငျနတောမို့ mobile banking call.center ကိုဆကျပီး အကြိူးအကွောငျးလှမျးပွောပါတယျ သူတို့က တယောကျယောကျသူံးနပေါတယျ သူတို့ထိနျးပေးမယျပွောလို့ ဒကျဒီကအကောငျ့ကိုမကျြခွမေပွတျစဈနပေါတယျ စဝငျတာ ၉နာရီ ၅၃ မိနဈပါ မတျဆတေ့ေ ဆကျတျုကျရောကျလာပီးတော့ စဈနတေုနျးပးမှာပဲ 10:19 မှာ သိနျး ၅၀တဈခါ 10:28 နှဈခါ သိနျး ၁ရာပါသှားပါတယျ
ကိူယျလညျးဘဏျပွေး ဒကျဒီလညျးရုံးကနဘေဏျကိုလိုကျလာကွပါတယျ ရနျကငျးဘဏျခှဲမနျနဂြာ အဈမကိုပွောပွတဲ့ထူတျလို့ရတဲ့ minimum amount ကို0ထားလိုကျပါတယျဒါတောငျကြှနျမ ကိုပွောနသေေးတယျဦးကပိတျထားတယျဆိုပမေဲ့ minimum ထားလိုကျမှရတာဆိုတာကို အာ့အဲ့ထိကို ဘဏျမနျနဂြောဆိုသူက အေးဆေး အနအေထားပါကြှနျမကပွောပါတယျ internal account transfer မို့ လှဲသှားတဲ့အမောငျ့ကိုကွညျ့ပေးပါလို့ဆိုတော့ mobile banking ကိုငျတဲ့ center ကိုပွောမှရမာတဲ့ ကြှနျမလညျးဒေါသကထှကျလာပါပီ အဈမတို့ဘဏျမှာထားတာ လေ
အဈမတို့လုပျပေးလေ တခုခုဆို ပွနျမရရငျအဈမ တို့ဘဏျကိုပွသာနာရှာမှာဆိုမှ ဝုနျးဒိုငျးထ လုပျပါတော့တယျ
အဲ့အခြိနျအဖကေ mobile banking ဘကျကဖူနျးဆကျလာပါတယျ လှဲသှားတဲ့အကောငျ့က မွောကျဥက်ကလာခမောသီ ဘဏျခှဲ ပါတဲ့အဲ့အကောငျ့ကိုသဲူးခှငျ့ရောထုတျခှငျ့ပါပျတျလိုကျပါတယျ….
ဖှငျ့ထားတဲ့ဘဏျရဲ့မနျနဂြောနဲ့တိုငျပငျပါရဲမှုခငျးဖှငျ့ပါလို့ပွောပါတယျ မနျနဂြောမမ က အနျကယျဘာလုပျခငျြပါသလဲတဲ့ ဒကျဒီလညျးဈတျတိုနပေါပီ အနျကယျ့ပိုကျဆံပွနျထညျ့ပေးပါပွနျလျုခငျြတာပေါ့ကှယျထိုငျကွညျ့နရေမလားဆိုမှ ဟိုဖုနျးဆကျဒီဖုနျးဆကျလူပျနပေါတယျ
သူခနခနထပျခါထပျခါပွောနတောက Mobile banking pwd သိသှားလို့ဖွဈတာပါဆိုတာပါပဲ
(Mobile banking pwd သိတယျပဲထားပါတော့ သူငှလှေဲမယျဆိုတော့ daddy ph ထဲဝငျလာတဲ့ pwd ကို ဟိုဘကျကလူက အကွားအမွငျရနလေို့သိပီးလှဲသှားတာလား သူတို့ရဲ့ mobile banking safe မဖွဈတာလား ဆိုတာထမငျးစားကွီးသူတိုငျးသိမှာပါနျော)
ကဲအခုကတော့ကြှနျမတို့ရဲစခနျးသှားနပေါပီ ရဲစခနျးကထောကျခံစာပါမှ မွောကျဥက်ကလာခမောသီ ဘဏျခှဲက လူရဲ့ ဒတောတကေိုဘဏျမှာတောငျးကွညျ့ပီးတရားစှဲလိူ့ရမှာပါ ငှသေိနျး၁ရာဘျာခြိနျပွနျရမလဲဆိုတာကတော့ပိတျကားပျေါမှာစောငျ့ကွညျ့ပါတော့နျော
ဘဏိ ဖကျမှ cyber law အရလိုကျနကွေောငျး၊ ပိုကျဆံအမွနျဆူံး ပွနျရအောငျဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈပါကွောငျး လုပျသှားတဲ့အကောကျ့ပိုငျရှငျကိုတော့ ခုထိ ရဲတောငျမခပြွသေးပါကွောငျး… (ဒါကြ security ကောငျးတယျ တလှဲဆံပငျကောငျးတယျဆိုတာ မြိုး )
ဒီကိစ်စတပွေီးရငျတော့ကြှနျမရော ဒကျဒီရော kbz account ကို ပိတျပါပီနျော တာ့တာပါပဲလို့ Customer တလေညျးအားနာပါတယျနျော နောကျဆို kbz လဲူးဝလှဲမရတော့ပါပုလိူ့နျော…..
This Year : 234635
Total Users : 593659
Total views : 2726443